गाडी दुर्घटना भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? : प्रवक्ता पाण्डे - Kantipath.com
संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सवारी सुविधा फिर्ता लिन संसदका पदाधिकारीहरुको सूची तयार पारेको छ ।
उक्त सूचीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा निकट नेकपा सचेतक शान्ता चौधरीसमेतको नाम सामेल छ । सांसदहरुलाई दिएका १८ सुविधाको गाडीमध्ये एउटामात्र फिर्ता भएको र बाँकी १७ वटा प्राप्तिका लागि सचिवालले सूची तयार पारेको हो ।
सचिवालयको सबैभन्दा महँगो गाडी लिनेमा देउवा र नेकपा सचेतक चौधरी छन् । देउवाले २ करोड मूल्य बराबरको गाडी सुविधा लिएका छन् भने चौधरीले एक करोड मूल्य पर्ने गाडी लिएकी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि चौधरीले नेकपा संसदीय दलको सचेतकको हैसियतमा लिएको सुविधाको गाडी फिर्ता नगरेको संसद सचिवालयले बतायो ।
हालसम्म संसदीय समिति अन्तर्गतको महिला समितिकी सभापति एवं प्रधानमन्त्री ओली निकट नेतृ निरु पालले मात्र गाडी फिर्ता गरेकी छन् । पालले संसद विघटन भएको ५ दिनपछि गत पुस १० गते सभापतिको हैसियतमा चढ्दै आएको प्रदेश ३ ०१००२ झ ४८७४ नम्बरको गाडी फिर्ता गरेकी हुुन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल, उद्योग समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, कृषि तथा सहकारी समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्ती, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाह, संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिका निरा जैरुले गाडी बुझाउनुपर्ने लिष्ट तयार रहेको संघीय संसद सचिवालयको भनाइ छ ।
संसद सचिवालयले हालसम्म गाडी फिर्ताका लागि पत्राचार भने नगरेको र अरु सुविधा कटौती भएका बेला आफै बुझेर गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए । पदावधि सकिएको एक साताभित्र गाडी फिर्ता गर्ने प्रचलन रहे पनि सामान्यतया ३५ दिनभित्र सरकारी सम्पत्ति बुझबुझारथ गर्ने प्रचलन अनुसार गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने सचिवालयले जनायो ।
संसद सचिवालयबाट ४ पूर्व सभामुखहरुले पनि सवारी सुविधा लिईरहेका छन् । पूर्व सभामुखहरु काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रचण्ड–माधव पक्षमा रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्तीले पूर्व सभामुखको हैसियतमा संसद सचिवालयको स्कारपियो गाडी चढिरहेका छन् ।
काँग्रेसका नेता एवं पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले भने सचिवालयको गाडी सुविधा लिएका छैनन् । संसद सचिवालका ८५ वटा गाडी सुविधाका लागि प्रयोग भइरहेको सघीय संसदको सवारी शाखाका प्रमुख कान्छा दुलालले जानकारी दिए ।रातोपाटीबाट
Previous Previous post: अमेरिकी संसद भवनमाथिको हमला स्वतन्त्र आयोगले छानबिन गर्ने
Next Next post: हरेकमा प्रज्ञा प्रकाश प्राप्त हुन सकोस् : प्रधानमन्त्री ओली